Bandowga habeenkii oo la kordhiyay – Radio Damal
Bandowga habeenkii oo la kordhiyay
Dowladda dalkani Kenya ayaa kordhisay mudada uu sii shaqeynaya bandowga habeenkii ee lagu xakameynaya faafitaanka caabuqa corona.
Waxaa arrinkan shaaca ka qaaday wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo isku duwidda howlaha qaranka Dr. Fred Matiangi oo soo xigtay amar madaxweyne oo ka soo baxay hoggaamiyaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta.
Waxaa amarka madaxweynaha ku cad in bandowga iyo amarrada kale ee lagula tacaalaya cudurka COVID-19 ay sii jirayaan ilaa iyo 12-ka bisha saddexaad ee sanadkan.
Mr. Kenyatta ayaa xusay in kastoo ay hoos u dhaceen kiisaska maalinlaha ee la shaaciyo balse uu cudurku weli halis ku yahay caafimaadka iyo waxyaabaha ay nolosha bulshada ku tiirsan tahay.
Tallaabooyinka mudada ay sii jirayaan la kordhiyay waxaa ka mid ah xiridda baararka ee 9-ka fiidnimo oo madaxweynaha soo saaray 4-tii bishii 11-aad ee sanadkii hore xilligaas oo wax laga beddelay saacadihii bandowga habeenkii.
Bandowgan ayaa shaqeeya inta u dhexeysa 10-ka habeenimo ilaa iyo 4-ta aroornimo.
Sidoo kale waxaa muddo 60 maalmood oo dheeraad ah mamnuuc ah isku soo baxyada siyaasadeed iyo kulamada dadweynaha marka laga reebo xafladaha arooska iyo aaska oo la yareeyay tirada dadka ka qayb geli karo lagana dhigay 150.
Xita xafladahan, munaasabadaha lagu qabto goobaha shirarka iyo goobaha cibaadada waxaa weli shaqeynaya amarkii ahaa in si buuxda loo raaco amarrada ka dhanka ah cudurka sida kala fogaanta iyo isticmaalka afxirka ama maaskarada.
Madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa sidoo kale mamnuucay dhammaan munaasabadaha habeenkii.
Sidoo kale waxaa sare loo qaadayaa tayada howlwadeenada caafimaadka iyagoo loo qeybinaya agabka ay iskaga difaaci karaan cudurka ee loo yaqaano PPEs.
Sida ku cad amarka madaxweynaha Kenya ee uu maanta warbaahinta la wadaagay wasiirka arrimaha gudaha dowladaha ismaamullada ayaa laga doonaya inay maalgeliyaan adeegga bukaanada ka caawiya neefsashada ee goobaha gaarka ah iyo xarumaha lagu daaweeyo dadka uu haleelay cudurka COVID-19.
Dhammaan rakaabka saaran gaadiidka dadweynaha iyo baabuurta shakhsiyeed waxaa khasab ku ah inay afka iyo sanka maro ku xirtaan.
Baabuurta dadweynaha ee loo yaqaano PSvs waxaa looga baahan yahay inay qaadaan ugu badnaan boqolkiiba 60 ee rakaabka gaarigaasi raaci karo.
Go’ammadan ayaa la qaatay kaddib markii la tixgeliyay soo jeedinnada guddiga ka talo bixiya amniga qaranka iyo guddiga qaran ee loo xilsaaray falcelinta degdegga ah ee ku aaddan cudurka COVID-19.
Dhanka kale madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in cudurka COVID-19 oo laga guulaysto ay ku xiran tahay habdhaqanka qof kasta iyo sida uu mas’uuliyad shakhsiyeed iskaga saaro badbaadinta noloshiida iyo bulshada.
Waxaa uu hoggaamiyaha dalka dhammaan shacabka ugu baaqay inay sii wadaan u hoggaansanka amarrada dowladda iyo talooyinka caafimaad ee lagula dagaalamaya cudurka.
Arrimahan waxaa ka mid ah in qofku uu sida haboon u xirto maaskarada wajiga, in labada qof ee isugu dhow ay u dhexeyso ilaa 1.5 miitir , in si joogto ah gacmaha loogu dhaqdo biyo, saabuun iyo gacmo nadiifiyaha loo yaqaano sanitizer iyo in si joogto ah loo buufiyo ama la nadiifiyo meelaha sare ee ay inta badan gacmuhu gaaraan ama taabtaan.